Namuhla singathanda ukuxoxa ngenkinga encane. Umsebenzi wegciwane lokugaya unquma ngezindlela eziningi isimo sethu sempilo, ukuthokoza kanye nenhliziyo enhle. Futhi kubalulekile hhayi ukudla okufanele kuphela, kodwa futhi nokuthutha okuzinzile, ukuze umzimba ungathumeli imikhiqizo yokuphila. Kuhle kakhulu, uma ungakaze uhlangabezane nezinkinga ezinjalo, futhi indlu yangasese yangasese ayibangeli izinhlangano ezingathandeki. Kodwa abantu abaningi bazi ngokwabo ukuthi i -Sphincter ye- rectum iyiphi i- spasm . Izimpawu ziyinto engavamile kakhulu, ubuhlungu futhi bukhuni emathunjini aphansi, okulukhuni ukubhekana nakho ngaphandle kokuthatha ama-antipasmodics. Namuhla sizokhuluma ngalezi zindlela nezindlela zokubhekana nazo ngokuningiliziwe okuningiliziwe.
Okuncane mayelana nezici zomzimba
Iyini i-sphincter ye-rectum? Kuyinto element muscle. Itholakala ngokuqondile ku-rectum futhi iklanyelwe ukulawula ukugcinwa kwemfucuza. Ngakolunye uhlangothi, lenza umsebenzi wokukhiya, futhi uma kukhona ukuqoqwa okwanele kwabantu - kuvula. Ngokuvamile inqubo elawulwayo. I-sphincter ye-rectum ivula kuphela endaweni efanele (endlini yangasese), futhi hhayi endleleni eya ekhaya evela emsebenzini.
Ukuze i-sphincter isebenze kahle, indawo yayo ihlanganiswe nenani elikhulu lamaseli e-receptor, kanti ingxenye yangaphakathi iyisisindo se-muscle esithintekayo, esakha indandatho. Ngenkathi ingane encane, isebenza kwimodi yemvelo, okungukuthi, ngokushesha emva kokuba izidingo ezivela phambili zilandela ukuphuma kwamathumbu. Njengoba ukhula futhi ujwayele embizeni, i-sphincter ye-rectum iyaqeqeshwa ngokuphindaphindiwe, ivinjelwe imfucumfucu kanye negesi ngokuphumelelayo.
Iyini i-spasm ye-sphincter
Lesi akusona isifo, kodwa kuphela ukubonakaliswa kwayo, ngakho odokotela kuzodingeka baphenye ngokugcwele ukuze banqume ukuthi yini eyabangela lesi simo. Futhi sizoqala ngokukutshela lokho okuvezwe yi-spasm ye-sphincter ye-rectum. Izimpawu ngokuyinhloko ubuhlungu. Akubangelwa ukuvuvukala, kodwa ngokucindezeleka okubuhlungu kwemisipha, enesimo sengqondo noma somatogenic.
Isithombe esinjalo siyinto ejwayelekile kumathambo amaningi amaningi, ngakho-ke uma odokotela bethi nge-sphincter ye-rectum, kusho ukuthi izilonda eziphilayo zalesi sigaba samathumbu azikho. Okusho ukuthi, kukhona ubuhlungu be-etiology engaziwa.
Kunzima hhayi kuphela ukuxilongwa. Izifo ezinjalo izimpawu ngokuvamile zihlala isikhathi eside futhi kunzima kakhulu. Asikwazi ukuvimbela amathumbu ngenkathi yokwelapha, ngisho nokudla okuncane, kusekhona umthwalo kuwo. Futhi ubuhlungu obungapheli, okuyinto enzima ukususa ngisho nezidakamizwa ezinamandla, uphelelwe ngokomzimba nangokwengqondo. Ngokuvamile, abantu bakhumbula ukuxilongwa okubi kakhulu, okuvamise kakhulu kwendalo, okwenza ngcono isimo sakhe.
Okuningi mayelana nezimpawu
Ungasolula kanjani ukuthi une spasmodic sphincter ye-rectum? Kulula ngokwanele. Ukuqina, ubuhlungu be-paroxysmal ngeke kwenze iphutha. Izimpawu ezilandelayo ziyabonakala:
Ubuhlungu obukhulu bemvelo ye-paroxysmal, efaka i-perineum. Mayelana nalokhu, iziguli zithinteka ukuloba izimpawu ezifweni ezingenasifo zengqondo, izinkinga zomzimba zangaphakathi.
Qaphela ukuthi ubuhlungu bungase buhambisane nesenzo sokuhlukunyezwa noma ukuvela ngokwahlukana nayo.
Ngokuvamile, ngemva kokugeza, ubuhlungu buyaphumelela kakhulu, nakuba kungase kungabi nakancane.
Iphuzu elibalulekile yisisusa se-spasm. Lokhu kuyisihluthulelo sokuguqula, nokuqokwa kokwelashwa okwanele. Ngokuvamile kaningi akucasuli izifo ezithathelwanayo, kodwa ingqondo-ngokomzwelo: okuhlangenwe nakho, ukucindezeleka okungapheli nezinkinga zezinzwa, kanye nokusebenza okwanele ngokomzimba.
Okudingayo ukwazi wonke umuntu
Sisebenzise kakade lolu daba kancane, kodwa kubaluleke kakhulu ukubhekana nale nkinga ngokuningiliziwe. Ukwelashwa kwe-sphincter ye-rectum, noma kunalokho kuphumelela, ngokuqondile kuxhomeke ekutheni udokotela wazi ukuthi izizathu eziningi kangakanani. Yini ebangela i-spasm? Kuyinto yokweqa kwemisipha ebushelelezi. Lokhu kungafaka phakathi i-sphincter yangaphandle noma yangaphakathi. Kodwa lena yingxenye yenkathazo. Ngokuchotshozwa kwemisipha ebushelelezi, kukhona ukudonsa, ngezinye izikhathi ubuhlungu obukhulu, ngokuhlukahluka ngesikhathi nobukhulu, njengoba izinzwa nemithambo yegazi zikhonjiwe.
Ngokuvamile lokhu kuhlasela kubonakala kubantu asebekhulile. Ngesikhathi esifanayo, akukho hlukana phakathi kwamadoda nabesifazane, bonke bangakwazi ukugula. Kungani lesi sitho samathumbu sithandwa yizinambuzane? Lokhu kubangelwe ukulungiswa okuhle. Yini engabandakanywa lapha:
Ukuphulwa kobuqotho be-mucosa;
Ama-veicic veins noma izitsha.
Ngenxa yalokho, isiguli sizwa ubuhlungu obukhulu, okuyinto enzima ukuyilungisa ngemithi.
Ngaphambi kokuba sikhulume ngokuthi singasusa kanjani isikhala se-sphincter ye-rectum, sizoyeka kwenye indawo. Kukhona iqembu elithile leziguli okungenzeka likwazi ukuthuthukisa le pathology. Laba ngabantu:
Ukuhlupheka kusuka ku-CNS pathology.
Ngenxa yezinkinga ezikhulunywe ngenhla, i-spasm ye-anal anal eqala, okwandisa ikhono lomzwelo futhi, ngenxa yalokho, ubuhlungu. Ngaphezu kwalokho, le syndrome ingabangelwa ukuhlukunyezwa okuhlukahlukene kokungabikho. Lokhu kungumphumela wokulimala noma ukuzalwa okunzima. Ngokuvamile i-spasm ye-anal sphincters iqala abesifazane abangenakulinganiseka ngokomzwelo. Amadoda angena kulo mkhakha kancane kancane, nakuba isibonakaliso socansi, njengoba sesishilo kakade, akuyona into enkulu.
Izinkinga ezivame kakhulu ziphakama lapho i-sphincter yangaphakathi ye-rectum i-spasmodic. Okokuqala, zingahlukaniswa ngesikhathi sokuhlaselwa:
Ngokujwayelekile, ukukhubazeka okuncane okufanayo kuyashesha futhi kuyashesha kanyekanye. Kulokhu, ukukhululeka kwalesi simo, akukho mithi ejulile edingekayo. Isiyaluyalu sibonakala ngesimo sokudweba okungazelelwe noma ukuhlunga. Ngokuvamile iziguli zithola ukunganaki esifundeni se-perineal. Futhi ezinye zazo ziqala ukwelapha izifo ezikhohlisayo ze-prostate gland, izinso kanye nesibindi. Ngiphinde ngifuna ukukhumbula ukuthi noma yikuphi ukwelashwa kuqala ngokuxilongwa okwanele. Ngaphandle kwalokhu, akuyona nje engasebenzi, kodwa futhi kuyingozi.
Ubuhlungu obude be-etiology engacacisiwe cishe abuphenduli ku-anesthesia, futhi ukuqubuka kungaqhubeka izinsuku ezimbalwa. Futhi ukugeleza okungalingani kuyisici, emva kwesikhathi esithile ukuvama kokugwedla kwanda. Noma kunjalo, izimbangela ezibangela ukucindezeleka ubuhlungu azichazwe ngokuphelele. Kodwa-ke, odokotela baye baqaphela isikhathi eside ukuthi isimo sengqondo sesiguli sithinta kakhulu isimo samathumbu. Ukucindezeleka kanye nomzwelo ngokushesha kubangela ukuqhuma kwesimo.
Kukhona isigaba se-etiologic factor. Kulokhu, okulandelayo kubonakala:
I-spasmodics eyinhloko. Uma uqhathanisa izithombe ezimbili ze-sphincter ye-rectum-spasmodic futhi enempilo enhle - ungabona ukuthi azifani kakhulu. Esimweni sethu, lokhu kungumzimba we-muscle spasm, okuvame ukwenzeka ngokumelene nesimo sokucindezeleka futhi udlule isimo sijwayelekile.
Secondary. Le ngxabano ayibonakali yodwa, kodwa ivela emlandweni wezinkinga ezithile ze-rectum. Lezi zihlanganisa ama-hemorrhoids kanye nama-fissures, isifo sika-Crohn kanye nama-tumor emgodini owenziwe.
Noma yiziphi izinkinga ngamathumbu zidinga ukunakwa, ukubonisana ngesikhathi esifanele nongcweti. Okokuqala imbangela inqunywe, ukusebenza okuphumelelayo kunomphumela wokwelapha.
Ukuvakashela okokuqala kudokotela
Konke kuqala ngenhlolovo. Indima ebalulekile idlalwe yiqoqo le-anamnesis. Ngokuvamile, iziguli zikhonjelwa izifo eziyinhloko, okuholela ekuthuthukiseni imicimbi. Lezi ukulimala okudlulisiwe kanye nokusebenza okuhlukahlukene. Ngokuvamile, imbangela eyinhloko yizifo ze-rectum nezitho zesistimu ye-genitourinary. Ungakhohlwa ukuthi imisipha yomzimba wethu ehlangene ixhunyanisiwe, ngakho-ke umthamo wezinto eziyinhloko uhlangene nama-spasms ama-muscle ezinye izitho. Lokho kuhlanganisa:
Ukuhlolwa kwezindonga ze-rectum;
I-colonoscopy ihlola ikholoni.
Njengoba ungeke ususe isikhala se- sphincter ye-rectum ubusuku bonke, kuyodingeka ulandele izincomo zodokotela eziningi ukuze uthuthukise isimo. Ukukhetha izindlela zokwelashwa kuzoxhomekeka esimweni jikelele nesokwengqondo sesiguli, ukutholakala kwezifo ze-somatic.
Kodwa umsebenzi wokuqala wodokotela ukukhipha isikhala se-sphincter ye-rectum. Ukwelashwa kufanele kuqale ngokuqedwa kwesifo kanye nokususwa kwesibindi. Kuze kube sekugcineni, misela ama-antispasmodics kanye nemithi yokwelashwa. Uma kunesidingo, misela ama-antibacterial agent, futhi ngokuqothulwa - ama-laxatives.
Lona umgomo wesiguli nodokotela, okulula ngaso sonke isikhathi ukufeza ngosizo lwemithi yedwa. Kuhle kakhulu kulokhu kusiza izinqubo ezishisayo, kanye nezindlela zokwelashwa ze-physiotherapy. Ngokufanayo, kubalulekile ukwenza i-anesthesia nge-antispasmodics kanye ne-painkillers. Kungcono ukusebenzisa i-Relief Advance, i-Procto-Glivenol, i-Venoruton, i-Ultraprotect, i-Prosterizan Fort, amakhandlela anezibilini namafutha olwandle. Ngama-antispasmodics, ngokuvamile asetshenziselwa i- "No-shpa", kanye nokugeza okufudumele okufudumele.
Ukuxazulula izinkinga ngokuqothulwa
Kubaluleke kakhulu ukuba unakekele indlu yangasese. Kubaluleke kakhulu ukugcina indawo ye-anus ngokuhlanzeka okuphelele. Njalo ekuseni udinga ukuzigeza, usebenzisa ishayela salokhu. Kuhle ukuphinda le nqubo ngemuva kwesenzo ngasinye sokuhlukunyezwa, ukuze ungacasuli ama-mucous by friction. Ukudla okulungile kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu. Ukudla kufanele kube mnene ngangokunokwenzeka ukuze kuncishiswe umthwalo wezingxenye ze-digestive tract. Lapha konke okulula: amafutha, amnandi, okuthosiwe kanye nama-spicy kufanele akhishwe ekudleni. Isisekelo yizimpuphu kanye nama-porridges ahlanzekile, izithelo eziphekiwe kanye nemifino. Qaphela irejista yokuphuza.
Uma ukwelashwa okunye kungasebenzi, kufanele ukhethe izinyathelo ezingaphezulu. Okokuqala, odokotela basebenzisa izidakamizwa ezihlukene, kanye nezindlela zokwelashwa ezizimele. Uma ukuhlukunyezwa kuba njalo, futhi izinkinga ezinkulu ziyongezwa, ngakho-ke akukho okukhethwa kukho. Kulesi simo, usebenzise ukungenelela okuhlinzayo - sphincterotomy. Iqukethe ukuzikhethela okuyingxenye yemisipha ye-sphincter yesilwane. Lokhu kuholela eqinisweni lokuthi imisipha ebushelelezi ikhululekile, kanti ubuhlungu buyancipha kakhulu. Isizathu asiqedwe, kepha isiguli sisathola imiphumela emihle.
Izindlela zendabuko zokwelashwa
Uma lesi simo singakafiki kakhulu, ungasebenzisa i-phytotherapy kadokotela. Kulesi simo, kunconywa ukuba uphathe izinselele ze-sphincter yangomzimba nge-decoctions yamakhambi omuthi noma isisombululo se-potassium permanganate. Imithi yokwelapha ihlanganisa izidakamizwa kanye nama-microclysters, amathoni nama-suppository.
Ukuhlala okugeza akulula ukulungisa. Ukuze wenze lokhu, udwebe amanzi amancane afudumele ku-pelvis, engeza i-potassium permanganate. Inqubo kufanele iphindwe okungenani izinsuku ezingu-7-10. Akuzona izimbizo zokusiza ezimbi nge-decoction noma ukumnika izitshalo zokwelapha ezinomphumela we-antispasmodic noma ophuzayo. I-chamomile ne-yarrow, i-St John's wort ne-oak bark, i-calendula. Izimila zingaxubaniswa noma zenzeke. I-decoction yamakhambi okwelapha isetshenziselwa ukulungiswa kwe-enemas kanye ne-tampons.
Ukungabi namandla kwe-sphincter
Lokhu kuyinto ehlukile kakhulu kulowo esixoxwe ngenhla. Uma singakaxoxe ngokuthi singaphula kanjani i-sphincter ye-rectum, sivame ukuchitha ukungcola kwegesi kanye nesitoreji bese ususa ubuhlungu, manje sidinga ukunaka ukuthi yini okufanele siyenze ngokunciphisa indandatho efanayo yokukhiya. U-sphincter obuthakathaka we-rectum uholela ekungeneni kwegesi, udoti oluthile noma oluqinile.
Ukwelashwa kudinga ukucubungula izici zomuntu ngamunye, kanye nokuphulwa. Njengomthetho, uma i-sphincter ye-rectum ikhululekile, kudliwa ukudla okukhethekile, ukuchithwa kwe-electrostimulation nokusebenzisa imithi yokwelashwa. Ukwelashwa kwezidakamizwa kuleli cala kufanele kuqondiswe ekwelapheni izifo ezivuthayo kanye ne-dysbiosis.
Uma i-sphincter ibuthakathaka ngenxa yezizathu eziphilayo, ukungenelela kokuhlinzwa, okungukuthi i-sphincteroplasty, kuyadingeka. Ngemuva kwalokhu kusebenza, ukwelashwa okude okubuyisela ngokudla okudingekayo kuyadingeka.
Impilo yamathumbu ethu incike kakhulu kithi. Ukudla okulungile, ukulinganisela okuhle kokuzivocavoca nokuphumula, ukugwema ukucindezeleka okukhulu - konke lokhu kuyizindlela eziyinhloko zokuvimbela izifo zesimiso sokugaya ukudla ngokujwayelekile kanye nesisu ngamathumbu. Ukucindezeleka ngokweqile, kanye nobuthakathaka be-sphincter ye-rectum, kungaba umphumela wezifo eziningana, okunye okudinga isimo sengqondo nokusekela kwezokwelapha.
Kungani idrayivu ungafundi akwazi ukugcina? Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu nezisombululo le nkinga